စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင် အိန္ဒိယကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ စစ်ရေယာဉ်နှစ်စင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာ | cincds
စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင် အိန္ဒိယကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ စစ်ရေယာဉ်နှစ်စင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး အလည်အပတ်ခရီး ရောက်ရှိနေသော အိန္ဒိယကမ်းခြေ စောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ကမ်းလွန်ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ICGS Sujayနှင့် အမြန်သွားကင်းလှည့်ရေယာဉ် ICGS Sarojini Naidu သို့ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Shri Saurabh Kumar၊ အိန္ဒိယကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Deputy Inspector General Anurag Kaushik နှင့် တာဝန်ကျ တပ်ဖွဲ့တို့မှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်၍ ရေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ထို့နောက် ကမ်းလွန်ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ICGS Sujay ပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ(ရေ) ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးမိုးအောငျ အိန်ဒိယကမျးခွစေောငျ့တပျဖှဲ့မှ စဈရယောဉျနှဈစငျးသို့ သှားရောကျလလေ့ာ
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေး အလညျအပတျခရီး ရောကျရှိနသေော အိန်ဒိယကမျးခွေ စောငျ့တပျဖှဲ့မှ ကမျးလှနျကငျးလှညျ့ရယောဉျ ICGS Sujayနှငျ့ အမွနျသှားကငျးလှညျ့ရယောဉျ ICGS Sarojini Naidu သို့ ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျ ညနပေိုငျးတှငျ စဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ(ရေ) ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးမိုးအောငျ၊ ရနျကုနျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျသကျပုံနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက သှားရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာကွသညျ။
စဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ(ရေ)နှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယသံအမတျကွီး H.E. Mr. Shri Saurabh Kumar၊ အိန်ဒိယကမျးခွစေောငျ့တပျဖှဲ့မှ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ Deputy Inspector General Anurag Kaushik နှငျ့ တာဝနျကြ တပျဖှဲ့တို့မှ ကွိုဆိုနှုတျဆကျ၍ ရယောဉျပျေါတှငျ လိုကျလံရှငျးလငျး ပွသကွပွီး အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။ ထို့နောကျ ကမျးလှနျကငျးလှညျ့ရယောဉျ ICGS Sujay ပျေါတှငျ ပွုလုပျသညျ့ ညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။